Iniesta: Maku riyoonayo inaan ku guuleysto Fifa Ballon d'Or 2012. - Caasimada Online
Home Warar Iniesta: Maku riyoonayo inaan ku guuleysto Fifa Ballon d’Or 2012.
Iniesta: Maku riyoonayo inaan ku guuleysto Fifa Ballon d’Or 2012.
Xidiga kooxda Barcelona Andres Iniesta ayaa qirtay inuusan ku riyooneyn inuu ku guuleysto abaal marinta Fifa Ballon d’Or 2012.
Iniesta ayaa u guuleystay xidiga ugu wanaagsan qaarada Yurub xagaagan, waxaana lagu amaanay qaab ciyaareedkiisa isagoo cadeeyey inuu hada u faraxsan yahay heerka uu u ciyaaro.
“Waxaan isku dayaa inaan ciyaaro kubadeyda waxaana muhim ah in dadku igu amaanaan shaqadeyda, laakiin daruuri ma ahan inaan ka fikiro wax ku saabsan iyada [Ballon d’Or],” ayuu kubad sameeyaha Blaugrana u sheegay RMC.
“Ballon d’Or khasab ma ahan inaan ku riyoodo caqli ahaan. Khasab ma ahan inaan ka fikiro wax ku saabsan abaal marino khaqsi ahaan, laakiin hadii aan guulo gaaro, dabcan waan ku farxi lahaa.
“Waxaan dareemayaa inay wax gaar ah ii tahay inaan u ciyaaro kooxdaan, kooxdii ugu wanaagsaneyd ee Barcelona, taasoo aan rajeynayo inaan xirfadeyda kusoo gunaanado, iyo Spain. Oo aan iskala ciyaarno ciyaartoy aan isku koox nahay, weli waxaan dareemayaa inaan aad u fiicanahay maalin walbana aan kasii fiicnaanayo.”
Iniesta ayaa si dhaqso ah dareenkiisa oo dhan u siiya ninka ay isku kooxda yihiin ee Lionel Messi marka laga hadlaayo abaal marino.
“Messi waa ciyaaryahanka ugu wanaagsan caalamka,” ayuu ku daray xidiga reer Spain. “Uma baahna wax yaabo badan wuxuu heystaa wax yaabo dabiici ah. Inaad isaga la ciyaarto waa wax aad u fudud, sid ciyaartoyda oo dhan ay isaga ula ciyaari karaan ayaan ula ciyaaraa.”